Antoky ny fandrosoana ny fitiavan-tanindrazana – Blaogin'i Voniary
Aoka isika tsy ho voafitaka, tsy resaka kajikajy ekonomika fotsiny no mitondra any amin’ny fandrosoana. Tsy maintsy latsa-paka ao anatintsika ny fitiavan-tanindrazana ary asehontsika amin’ny fihetsika farany izay bitika indrindra, vao hiroso amin’ny tena fandrosoana isika. Tsy maintsy entanin’ny fihetseham-po iraisana isika Malagasy rehetra vao afaka miara-mandroso. Matoa mitotongana toy izao ny firenentsika na dia eo aza ireo harena voajanahary misy eto amintsika dia tsy ampy ny fitiavan-tanindrazana ao amin’ny tsirairay. Toe-javatra vitsivitsy fotsiny no entiko eto mba afahantsika mandinika.
Sakana lehibe amin’ny fandrosoana ny tsy fahampian’ny fitiavan-tanindrazana
Ho saritsarim-pandrosoana hatrany no hisy eto raha aleontsika mividy ireo entana avy any ivelany toy izay ireo vokatrin’ny hatsembohan’ny mpiray tanindrazana amintsika. Iaraha-mahita ny vokatr’izany fa mitsipozipozy ireo orinasa mpanodina satria vitsy ny mpanjifa. Tsy vitan’izany fa na ireo orinasa vao mitsangana aza dia misafidy ny hirotsaka any amin’ny sehatrasa fahatelo (varotra, torohevitra, fikirakirana solosaina, serasera, sns) raha ny fambolena sy ny fanodinana vokatra no tokony ho fototry ny toekarentsika.
Ho toy ny rano atondraka an-damosin-gisa ihany ireny tetikasa sy hetsika fampandrosoana isan-karazany ireny raha mbola teny vahiny no ampianarana ny zanaka Malagasy sy ampiasaina amin’ny raharaham-panjakana. Etsy andaniny, fahalalana misavoan-danitra tsy hitany ampiarina eto an-tanindrazana no norantovin’ireo avara-pianarana ka na ny tenin-drazany, ifaneraserany amin’ny mpiara-belona aminy aza, tsy voafehiny. Etsy ankilany, mahatsiaro voahilika ihany ny sarambabembahoaka satria teny frantsay izay tsy voafehiny akory no takiana etsy sy eroa araka ny voalazan’i Rado hoe « Mahagaga, fa eto an-tanindrazako aho nefa tenin’olon-kafa no takiana mba ho haiko vao mba mahazo anjara asa hamelomako ankohonana ».
Somambisamby ihany izay fivoarana kasaina raha toa mbola minia manary ny kolontsainy ny Malagasy. Haintsika tsianjery ny tantaran’izao tontolo izao, fa ny antsika ? Toa nalevina impito mandifitr’olona. Toy ny valalan’amboa ny fomban-drazantsika, ka na isika tompony aza tsy tia, nefa izay fombam-pivavahana sy finoana avy any an-kafa any ankatoavintsika moramora.
Ireo toe-javatra ireo no anisany tokony hovaina mba hirosoantsika amin’ny tena fandrosoana: fandrosoan’ny olona rehetra ary fandrosoan’ny maha-olona manontolo : vatana, saina ary fanahy.
Anisan’ny fototry ny fandrosoana ny Fanagasiana ny toe-tsaina
Inona ary no tokony hatao? Ampidirina amin’ny foto-piasainana ary ampiharina eo amin’ny fiainana andavanandro mihitsy io fitiavan-tanindrazana io fa tsy avela ho kabary imolotra fotsiny ihany. Tsy ho vita mora anefa izany araka ny filazan’I E.D. ANDRIAMALALA hoe: “toy ny zavatra ara-tsaina rehetra koa anefa dia mandeha tsikelikely sady miadana no tsy maintsy hanaovana io fanarenana io. Saingy tsy maintsy hatao, ary hatao tsy an-kijanona”. Manamafy izany koa I Mompera Henri DE LAULANIE raha nanambara fa fanentanana sy fampiofanana telopolo taona eo ho eo, izay vao ahitam-bokany ny fanovan-toe-tsaina.
Raha miaiky tokoa ary fa Malagasy isika, andao ezahina fantarina sy iainana ireo Soatoavina Malagasy mba hampirindra ny fiarahamonina. Andao henoina ireo fandaharana na tantara mamelabelatra ny fomba sy ny fahendren’ireo razantsika mba tsy ho very tadidy izy ireny. Andao omena lanja ny teny Malagasy eo amin’ny sehatra rehetra na any am-pianarana, na any am-piasana na amin’ny raharaham-panjakana ary indrindra eo amin’ny andavanandrom-piainantsika. Andao hanjifa ny zava-bitan’ny mpanao asa tànana sy ny orinasa Malagasy arak’ilay teny filamatrin’ny SIM hoe “Manjifa ny vita gasy aho, tombony ho an’ny rehetra”. Araka ny voalazako tetsy ambony, zavatra telo ireo noraisiko ohatra ireo dia ny vokatra, ny teny ary ny kolontsaina fa maro ny fomba afahana maneho ny fitiavan-tanindrazana. Tsarovy anefa fa ny fitiavan-tanindrazana dia tsy fankahalana ny hafa fa fametrahana ny an’ny tena ho loha laharana.
Mino aho fa raha iainantsika ny fitiavan-tanindrazana dia ho tonga amin’ny fandrosoana tena izy isika ary tsy ho very fanahy mbola velona tahaka izao manjo antsika izao. Ho maro ny olana voavaha raha raiki-tapisaka ao amintsika ilay toe-tsaina tena Malagasy fintinin’ny Jeneraly RAMAKAVELO Désiré amin’ireto teny roa ireto: Hasina sy Fihavanana.
Fanagasiana, fanagasiana ny toe-tsaina, fandrosoana, fitiavan-tanindrazana, kolontsaina, soatoavina malagasy, teny malagasy